Dj Lewis wuxuu si cad u muujiyey xiriirka Carmen Sama ee ay la leedahay daaha gadaashiisa Dj Arafat - teles relay
Dj Lewis wuxuu si cad u muujiyey Carmen Sama iyo xiriirka dambe ee Dj Arafat
Muujintii wali waxay kusii nagaaneysaa nolosha halyeeyga muusiga reer Houon Ange Didier oo dhintay bilo ka hor kadib marki uu garaacay gaariga gaariga intii uu socday mootada. Runtii, dhimashadiisu waxay dhalisay muranno badan iyo aayado badan.
Muujinno badan oo ku saabsan nolosha halyeeyga 'Legbebe Coupe' marna ma joogsaneyso inay aragto iftiinka maalinta. Dhowr adeegsadeyaal internet ah iyo kuwa eheladiisa ah ayaa sii wada waxyihin, gaar ahaan heesta Dj Lewis oo aan waqti u luminin muujinta weyn ee ku saabsan lamaanaha Carmen Sama iyo daaha dambe ee Dj Arafat.
Runtii, curiyaha heesta "Hargabka Avian" Waxa uu cadeeyay in dhab ahaantii uu yahay kii ku riixay Houon Ange Didier gacanta Carmen xitaa wuxuu cadeeyay in ay u mahadsantahay qofka u dhashay jaceylka Dj Arafat iyo Carmen Sama. "Waxaan kuu sheegay in aan guursaday oo aan ku bartay Mrs. waxaad tidhi anh foutaise." Waxaad kaloo guursan doontaa natiijada Carmen Sama » ayuu yidhi Dj Lewis xili uu daabacay baraha bulshada.
Waxaa muhiim ah in la muujiyo in madaxa Shiinaha loo arkay inuu yahay astaanta muusigga Ivory Coast isla markaana uu ka helay sharaf aad u sharaf badan Shiinaha iyo dowladda Ivory Coast intii lagu aasayay.
Maqaalkani wuxuu ugu horeyn u muuqday: https://afriqueshowbiz.com/cote-divoire-dj-lewis-fait-denormes-revelations-sur-la-relation-de-carmen-sama-et-feu-dj-arafat/
Jawaabta cusub ee Fame Ndongo ee Maurice Kamto: "Beenta xigta ee Madaxweynaha la doorto ... ee MRC waa la sameynayaa"
Jadwalka taariikhda FIFA: Qatarta ka dhalan karta CAN 2021?